HomeWararka MaantaNeymar, Mbappe, Griezmann Iyo Xiddigaha Kale Ee U Sharraxan Beddelka Ronaldo
Real Madrid ayaa suuqa u gelaysa raadinta beddelka Cristiano Ronaldo oo ku dhowaaqay inuu ka tegayo kooxdiisa oo uu la joogay siddeed sannadood, kaddib markii ay soo baxday dacwad lunsi cashuur ah oo waddanka Spain lagaga oogay.
Ronaldo oo ay da’diisu tahay 32 jir ayaa ka sokow saamaynta badan ee uu ku leeyahay Real Madrid iyo guulaha badan ee uu u horseeday, waxa isaguna uu ku mutaystay inuu xiddigga dunida la qaado saddex jeer, taas oo ay u dheer tahay inuu jebiyey rikoodho badan oo dhalinta goolasha ah.
Haddaba, wargeyska kasoo baxa caasimadda Spain ee Madrid ee lagu magacaabo Marca ayaa waxa uu daabacay ciyaaryahannada beddelka u noqon karaya Ronaldo ee Real Madrid ay isha ku hayso.
Neymar: Ka hor intii aanu ku biirin Barcelona, waxa tartan xooggan ugu jirtay Real Madrid oo markii dambe ka hadhay qiimihiisa oo sare usii kacay iyo Barcelona oo ka wareegtay suryo ay markii dambe ku mutaysatay eeb. Hadda Real Madrid qofka koowaad ee ay doonayso inay hesho, waxa uu noqon doonaa Neymar oo ay u diyaarinayso 200 milyan oo Euro oo lagu burburin karo heshiiska uu kula jiro Barcelona. Neymar laf ahaantiisu, waxa uu diyaar u noqon karaa inuu hoggaanka iyo madaxa ciyaaryahannada gudaha garoonka ee Real Madrid uu noqdo, maadaama oo Barcelona uu gacan yare u yahay Lionel Messi.
Mbappe: Ma jiro ciyaartoy ay uga fursad wanaagsan tahay inay hesho Kylian Mbappe oo ah da’yar. Waxa uu lambarka 9 uga ciyaaraa Monaco iyo France, haddii ay ku hungowdo Neymar ayaanay u dhaqaaqi doonaa amaba waxay isku deyi doontaa inay labadaba wada hesho.
Lewandowski: Xiddiga afka hore uga ciyaara Bayern Munich, ayaa ka mid ah ciyaaryahannada ay Real Madrid ku beddelan karayso Ronaldo, haddii ay madaxda kooxdu go’aamiyaan inay la xidhiidhaan Bayern Munich oo ay adag tahay inay dhayal ku fasaxdo. Waxa jira tibaaxo sheegaya in Lewandowski uu doonayo inuu mar uun u ciyaaro Real Madrid, raallina uu ka noqon doono inuu xirfaddiisa la yimaaddo Bernabeu.
Griezmann: Lacagta lagu burburin karo heshiiska uu kula jiro Atletico waa 100 Milyan oo Euro, heshiis sannad ah oo uu dhowaan ku kordhiyeyna waxa lagu samirsiiyey kooxo badan oo ay ku jiro Manchester United. Real Madrid way ku adag tahay inay Griezmann hesho, sababtoo ah labada kooxood ma kala iibsadaan ciyaaryahannada. Arrinta kale ee jirta ayaa waxay tahay in Atletico laga xayiray suuqa oo aanay waxba iibin karin, lagana iibsan karin. Sidaas oo ay tahay, haddana kooxdu isha ayay ku haysaa inay heli karto.
Dybala: Juventus ayaa uu ka tirsan yahay, xirfad ahaanna laacib lugtiisu hibo u leedahay inay siday sida ay doonto u maamusho. Mar hore ayaa lala xidhiidhiyey in Real Madrid ay doonayso, laakiin tegitaanka Ronaldo ayaa ku kellifaya Madrid inay xidhiidh xooggan la samayso si ay u heli karto.
PSG Oo Xod-xodanaysa Dani Alves
Motherwell 0-2 Celtic – HD All Goals & Highlights